विनयजंग जस्ता मान्छेलाई कानुन लागेन, दिन भर चौकी धाउदा पनि मैले न्याय पाइन मलाई दे ह त्याग गर्न बाध्य पारिदैछ : सपना रोका मगर – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विनयजंग जस्ता मान्छेलाई कानुन लागेन, दिन भर चौकी धाउदा पनि मैले न्याय पाइन मलाई दे ह त्याग गर्न बाध्य पारिदैछ : सपना रोका मगर
विनयजंग जस्ता मान्छेलाई कानुन लागेन, दिन भर चौकी धाउदा पनि मैले न्याय पाइन मलाई दे ह त्याग गर्न बाध्य पारिदैछ : सपना रोका मगर
काठमाडौ । वेवारिसे शव ब्यवस्थापनमा सकृय सपना रोका मगर र उनले अभिभावक मानेका विनयजंग बस्नेतबीचको विवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको छ । सपनाका बारेमा अनेक लाच्छना लगाउँदै विनयजंग सामाजिक सञ्जालमा खुला चेतावनी सहित आएका छन् । उनले सपनाका नराम्रा तस्बिर र भिडियो आफुसंग मोवाइल र पेन ड्राइभमा पनि छ भन्दै सपनाले अति गरे सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी सार्वजनिक रुपमै गरेका छन् ।
यतिञ्जेल चुपचाप बसेकी सपना रोका मगरले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् । सपनाले विनयजंगले आफु माथि गरेका कृयाकलाप विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै गुनासो गरेकी छन् ।
एक टेलिभिजनकर्मीले लेखेको स्टाटसमा कमेन्ट लेख्दै अहिले सम्म कानुनले आफुलाई न्याय दिन्छ भन्ने विश्वासमा विनयजंगका विरुद्ध केही नबोलेको भएपनि आफुले न्याय नपाएको गुनासो गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, यति धेरै चरित्र माथि धावा बोल्दा पनि कानुन छ न्याय पाउँछु भनेर चुप लागेँ ।
तर उनीहरु जस्ता ठूला मानिसका लागि कानुन पनि नलाग्ने रहेछ । प्रहरी कार्यालय धाउँदा धाउँदा दिक्क भैसके । मानिसले यसै कारण देह त्याग गर्न बाध्य हुने रहेछ । आज म त्यस्तै अनुभव गर्दैछु । उनको भनाईको आशय यस्तै छ ।’
संचारकर्मी युवराज कंडेल सामाजिक संजालमा लेख्दै भनेका छन्, बिनयजग बस्नेतले सपना रोकाको फोटो भिडियो मोबाईलमा मात्रै होइन पेन ड्राइभभरी छ भन्दै खुलेआम सार्बजनिक मिडियामा ध ‘म्की दिइरहेका छन् । यो निर्कृष्ठ अ’प’रा’ध हो , व्यक्ति जोसुकै होस्, सम्बन्ध जेसुकै होस, जस्तो सुकै होस् कसैले कसैलाई यसरी ब्ल्या’क’मे’ल गर्न पाइदैन। डिजिटल दुनियाँको ब्ल्याकमेल निकै आततायी हुन्छ ।
कंडेलले लेखेको फेसबुक स्टाटसको तल सपनाले कमेन्ट गर्दै लेखेकी छन्, उनिहरु जस्ता ठुला हरुको लागि कानुन पनि नलाग्ने रहेछ , अहिले सम्म कानुन नै छ भनी यति सम्म च’रित्र ह’ ‘त्या गर्दा पनि चुप थिए कानुन भन्दा माथी कोहि छैन भनेर, दिन भर चौकी धाउदा पनि केहिनै लागेन । आखिर देहत्याग कसरी हुदो रहेछ भन्ने कुरा बुज्दै छु !! म एउटा सपना म’रे’र केही पनि हुदैन बस हजार सपना हरु बाच्न जरुरी छ्?
यस कुराको पुष्टि बेवारिसे शव ब्यवस्थापनमै सक्रिय आकांक्षा पोखरेलले फेसबुक मार्फत पनि गरेकी छिन् । यसो त पत्रकार युवराज कँडेलको फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै सपनाले पनि आफू चौकी गएको तर विनयजंगलाई कारवाही हुन नसकेको बताएकी छन् ।
महाशाखाको २४ घण्टे चेतावनी, नेपालका यि स्थानमा दुई दिन विशेष सतर्कता अपनाउनु
अर्जुनको मृत्यु हुनुपूर्व आरोपित कमलको घरमा किन आएकी थिइन अर्जुन दासकी श्रीमती ? भिडियोमा हेर्नुहोस